Tweet OMN : Haala yeroo Oromiyaarratti hayyoonni maal jedhu? (Dec 22, 2018) |
OMN : Haala yeroo Oromiyaarratti hayyoonni maal jedhu? (Dec 22, 2018)
Barruu Lammii Beenyaa
Waliigaltee araaraa irratti
ABOn qaama sadaffaa gaafatee ture. Yeroo sana ani Norway ture. Qaama sadaffaan kun eenyu haa ta’u jennee ijoollee keenya waliin marii goone. Qeerroon sagalee tokkoon Abbootiin Gadaa qaama sadaffaa haa ta’an jedhanii yaada kennatan. Yaada Qeerroo kana walitti qabnee “Abbootiin Gadaa qaama sadaffaa yoo ta’an ni fudhattuu?” jennee hooggansa ABO gaafanne. Hooggansi ABO tole jedhe.
Yaada Qeerroo fi fedhii hooggansa ABO qabannee Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatoo dubbisne. Qaama sadaffaa taatanii dubbii ABO fi mootummaa Itoophiyaa xumuruu dandeessuu jennee gaafanne. Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatoo dhimma kana gammachuun dirqama isaa ofitti fudhatan. Kanumaan Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatoo, Dr Nagaasoo Gidaadaa, Ustaaz Kamiil Shamsuu, Qees Balaay Mokonnon, Qees Waaqshuum Iddoosaa fi Yunivarsiitii Finfinnee irraa ammoo pirofeesaroonni lama waliin ta’anii yaalii araara buusuu eegalan.
Maanguddoonni kun waliin ta’anii qabxiilee adda addaarratti erga walii galanii booda hooggansa ABO fi mootummaa Itoophiyaaf xalayaa barreessan. ABOn battalummatti maanguddoota kana simate. Gama mootummaan garuu ni rincicame. Booda keessa ammoo mootummaan maanguddoota kana waamee akka waliin Gama Ertiraa deeman itti hime. Abbaa Gadaa Bayyaanaa Sanbatoo dhimmuma kanaaf xiyyeeffannoo kennanii imala isaanii gara USA haquun qophii eegalan.
Dhumarratti mootummaan dubbii kana ofumaa fixanna jedhee Abbootii Gadaa of biraa hambisee Ertiraa deeme. Akkaataan marii sanaa dhuguma obbolummaa fi walkabajuun kan guutame ture. Jara Ertiraa dhimma kana moderate gochuuf taa’e malee qaama waliin mari’ate gidduu ormi hin turre. Afaan Oromoon wal mararsiifataa, wal kabajaa fi wal dinqisiifataa dhimma sana shaffisaan xumuranii miidiyaaf ibsa kennan. Obbo Lammaa Magarsaa Jaal Daawud Ibsaa waliin ta’anii “akka gaariitti waliif galle!” jedhan.
Har’a waliigalteen akka waliigaltee Wucaalee ta’ee jira. Waliigalteen sun garuma ofii fedhaniitti hiikame. Utuu dhugumaan Abbootiin Gadaa fi maanguddoonni sun qulqullummaan dhimma kana keessa seenan ta’ee kun hunduu hin dhalatu ture.
Ani kaleessa waraana eegaluuf dibbee tumame kana mormee “Dallaan diinummaa Oromoo gidduutti deebi’ee ijaaramee?” jedhee maxxanseera. Ammas waraana kana nan morma. Waraana kanarraa Oromoon gama kamiinuu hin fayyadamu. Waraanni eegalamnaan keessaa hin baanu. Waraana kana eegaluun kiyyoo diina keenyaan takaalamnee kufuuf wal affeeruudha. Kana hayyamuu hinqabnu.
Abbootiin Gadaa kana dura dhimma kanarraa dhiibaman amma duungoonis taatu barbaadamanii dhufuu qabu. Haqaan malee haqaaqamnee Oromoo hin aangessinu.
Muddee 22, 2018
Previous articleWhere is Abiy Ahmed going with his latest anti-Oromo campaign?
Next articleMelbourne, Australia: A young Oromo, Agartu, super talented, angel-voiced